Labels: SUSHI စားဖွယ်ရာများ
Dired Bean Curd Stick - ၁၂လက်မအရွယ် တချောင်း
ရေ - ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချင်ခွက် တခွက်
ဆီ - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်းသာသာ
1/2cup (125g) butter softened
3/4uup (150g) sugar
1 1/2cup 225g all purpose (plain) flour
2/3cup (100g )finely ground almonds
Freshly squeezed juce of 1lemon
ပြီးတာနဲ့ flour, almonds,salt& lemon juce တို့ကို ရောထည့်ပြီးလက်နှင့် ရောနယ်ကာ dought ရအောင် နယ်ပေးပါ
ရလာတဲ့ dought ကို warp in plastic warpနှင့် လေလုံအောင်ထုတ်ပြီး အေးသောနေရာမှာ မိနစ်၃၀ထားပေးပါ
Dought သား နှပ်ထားတဲ့အချိန်ပြည့်တာနဲ့ မုန့်ဖုတ်မဲ့ ဗန်းကို baking paper ခင်းပေးပါ
မျက်နှာပြင်ညီသော စားပွဲပေါ်မှာ ဂျုံမှုန့်အနည်းငယ်ကို ဖြန့်ခင်းပြီး dought ကို 1/4inch (5mm) အထူရအောင် လှိမ့်ပေးပြီး နှစ်သက်ရာ ကွတ်ကီးဖြတ်စက်ဖြင့် ဖြတ်ပေးပါ
အားလုံးပြီးတာနဲ့ မုန့်ဖုတ်မည့် ဗန်းပေါ်က baking paper ပေါ်မှာ တခုနှင့်တခု 2inches (5cm) ခွာပြီး ထည့်ပေးပါ
နေ့လည်နေ့ခင်း ဘာလေးစားရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားလိုက်တိုင်း စိတ်ထဲမှာ အများဆုံးပေါ်လာတာက လက်ဖက်သုပ်လေးပါဘဲ ဒီနေ့တော့ လက်ဖက်ကို ပြောင်းဖူးစေ့လေးတွေရောပြီး သုပ်ထားပါတယ် အရသာ တမျိုးပြောင်းပြီး သုပ်စားတာပေါ့နော်။
လက်ဖက်အသား ချဉ်ငံစပ်လေးနှပ်ထားနဲ့ အင်မတန်မှ လိုက်ဖက်ပါတယ် ချဉ်ငံစပ်လေးကို ပြောင်းဖူး အချိုလေးရောပြီး သုပ်ထားတာမို့ ချိုချဉ်ငံစပ် အရသာ တမျိုးလေးမို့ သုပ်စားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
မာမာသုပ်တဲ့ လက်ဖက်သုပ်နည်းလေး ပြောပါမယ်
ချဉ်ငံစပ်နှပ်ထားသော လက်ဖက်အသား - ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်းမောက်မောက်
လက်ဖက်အကြော်စုံ - လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပန်းကန် တလုံး
ဂေါ်ဖီ - အနေတော် ၂ရွက်
ပြောင်းဖူးပြုပ် - အစေ့ခြွေပြီးသား လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပန်းကန် တလုံး
ပုဇွန်ခြောက် - အကောင်ကြီးကြီး ၂၀ခန့်
ခရမ်းချဉ်သီးကို အလုံးလိုက် ရေဆေးပြီး ခပ်ပါးပါးလှီးထားပါ
ဇလုံကျယ်ကျယ် တလုံးထဲမှာ လက်ဖက်အသားနှင့်အတူ လက်ဖက်အကြော်စုံ ပြောင်းဖူး ဂေါ်ဖီခရမ်းချဉ်သီး ဆား နှင့်ဆီတို့ထည့်ကာ ခပ်ဖွဖွနယ်ပေးပါ
နယ်ပြီးတာနဲ့ပြင်မည့် ပန်းကန်ထဲ သင်္ဘောရွက်ခင်းကာ လက်ဖက်သုပ်ပြီးသားကို ခပ်ဖွဖွ ထည့်ပေးပါ
လက်ဖက်သုပ်ပေါ်မှ ပုဇွန်ခြောက်ကို ဖြူးပေးကာ ငရုတ်သီးစိမ်း ကြက်သွန်ဖြူတို့ကို ပန်းကန်ထဲထည့်ပေးပါ
ခင်းထားသော သင်္ဘောရွက်ကို တလုပ်စာလေးတွေဖဲ့ပြီး ပြောင်းဖူးလက်ဖက်သုပ် ထည့်ကာ ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီးစိမ်းတို့နှင့် တွဲဖက်ကာ စားသုံးနိူင်ပါပြီ။
Posted by Tuumar at 7:28 pm2comments:
Labels: လက်ဖက် စားဖွယ်ရာများ
ဒီမနက်တော့ မြန်မာပြည် အလွမ်းပြေ လက်ဖက်ရည်လေးဖျော်ပြီး အီကြာကွေးလေး လုပ်စားဖြစ်သွားတယ် အစားအသောက် မီးလိုတောက်မိတော့ ညောင်းလိုက်တာဆိုတာများ ပြောမနေပါနဲ့တော့ အရင်ဆုံး ယူကျူ့ကနေ လုပ်နည်းလေးရှာ လုပ်နည်းလေးရတော့ လိုတာတွေပြင်ပြီး အီကြာကွေး တချောင်းရဖို့ လက်တော့ တော်တော်လေး ညောင်းသားနော်။
မာမာ ယူကျူ့ကနေကြည့်ပြီး လုပ်ထားတဲ့ လုပ်နည်းလေးပြောပါမယ်
Baking power, dry yeast, sugar, salt&plain flour တို့ကို ဇလုံကျယ်ကျယ် တလုံးမှာ အရင်ဆုံး ရောမွှေထားပါ
အားလုံးသမသွားတာနဲ့ဂျုံမှုန့်ကိုထည့်ကာ ဇွန်းနဲ့ သမအောင်မွှေလိုက်ပါ
ပြီးတာနဲ့ ဆီနှင့်ရေကိုထည့်ပြီး လက်နှင့်နယ်ပါ
ဒိုးသား အရမ်းပျော့မသွားစေရန် ရေကိုနည်းနည်းခြင်း ထည့်နယ်ပေးပါ
လက်ကို မကပ်တော့ဘဲ ဒိုးသားပျော့လာပါက မျက်နှာပြင်ညီသော စားပွဲပေါ်မှာဒိုးသားကိုတင်ပြီး ၁၅မိနစ်ခန့် လက်ဖနောင့်နှင့်ဖိ လက်သီးဆုတ်နှင့်ထိုး လုပ်ပေးပါ
ဒိုးသားပြောင်ပြီး ချောလာပါက cling wrapနှင့် လေလုံအောင်ထုတ်ပြီး အခန်းတွင်း အအေးဆုံးနေရာမှာ တနာရီခန့် ထားပေးပါ
တနာရီပြည့်ပါက ဒိုးသားကိုထုတ်ကာ လက်ဖနောင့်နှင့် ၅မိနစ်ခန့် လုံးလိုက်ဖြန့်လိုက်လုပ်ကာ ဖိပြီး နယ်ပေးပါ
ပြီးတာနဲ့ မျက်နှာပြင်ညီသော စားပွဲပေါ်မှာ ဂျုံမှုန့် ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်းခန့်ဖြူးကာ ဒိုးသားကို 0.5cmအနေရအောင် လှိမ့်ကာ ဓါးနှင့်၂ပိုင်း ပိုင်းပေးပါ
မုန့်သားဖြတ်နေတုံး အ၀ကျယ်သော အိုးထဲမှာ ဆီ တလီတာခွဲခန့်ကို ထည့်ပြီး အပူပေးထားပါ
ပိုင်းထားသော ဒိုးသား၂ခုကို တခုခြင်းဆီ လက်ဖနောင့်နှင့် ဖိကာ ၁၀ခုစာရအောင် ဖြန့်ပေးပါ
ဒိုးသား ပြန့်သွားတာနဲ့ ဓါးပြတ်ပြတ်နှင့် 3cm×10cmအရွယ် ၁၀ခုစာ မှန်းပြီး ဖြတ်ပေးပါ
မုန့်သား ၂ခုစီကို ထပ်ပေးပြီး အရှည်လိုက် မုန့်သားအလယ်ကနေ တူနှင့်ဖိချပေးပါ
ဖိချထားသော မုန့်သားကို အသာယူကာ ရှည်သွားအောင် ဆွဲဆန့်ပြီး ဆီအိုးထဲ ထည့်ကြော်ပေးပါ
တဖက်ကျက်လျှင် တဖက်ကို လှန်ပေးပြီး နှစ်ဖက်လုံး ရွှေဝါရောင်သန်းလာလျှင် ဆယ်ပြီး ဆီစစ်ပေးကာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ
၃ယောက် ညမနက်စာအတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများ
မယ်ဇလီကိုင်းအရွက် - လက်တဆုတ်စာ
ငါးကျည်းကြပ်တိုက်ခြောက် - ၃ကောင် (မရှိလျှင် ငါးတမျိုးမျိုး ပြုပ်ပြီးထည့်ပါ)
ခရမ်းသီး - အရှည်သီး ၃တောင့်
ခရမ်းချဉ်သီး - အနေတော် ၂လုံး
ကြက်သွန်နီ - အနေတော် ၃ဥ
ကြက်သွန်နီ - တခြမ်း (ဟင်းဆီသတ်ရန်)
ဆန်စိမ်းမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်းသာသာ
မယ်ဇလီရွက်ကို ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ပထမတရည် မိနစ်၂၀လောက် ပြုပ်ပြီး သွန်ပြစ်ပါ
နောက်တရည်လဲပြီး ၅မိနစ်လောက်ပြုပ်ကာ ရေသွန်ပြီး ရေအေးစိမ်ကာ အရွက်များ ခြွေထားပါ
ခရမ်းချဉ်သီးကို အလုံးလိုက်ရေဆေးပြီး ၄စိတ်စိတ်ထားပါ
ကြက်သွန်နီကို အခွံခွာပြီး အလုံးလိုက်ရေဆေးထားပါ
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပါက အိုးတလုံးကို အပူပေးပြီး ဆီနှင့်နနွင်းမှုန့်ထည့်ပါ
ဆီပူလာပါက ကြက်သွန်အဖြူ အနီကိုထည့်ပြီး ကြော်ပါ
ကြက်သွန်များ နူးလာပါက ငါးကြည်းခြောက်နှင့် ခရမ်းသီးကို ထည့်ဆီသတ်ပါ
ကြက်သွန်နဲ့ ခရမ်းသီးနူးလာတာနှင့် ခရမ်းချဉ်သီး ဆားနှင့် အရသာမှုန့်တို့ထည့်မွှေပေးပါ
အရသာမြည်းပြီး လိုသလိုပြင်ကာ မယ်ဇလီရွက်ကိုထည့်မွှေပြီး တမိနစ်လောက် ပေးဆူကာ မီးပိတ်ပေးပါ
မီးပိတ်ပြီးတာနဲ့. အခါးဓါတ်မပါသလောက် ဖြစ်နေတဲ့ ဟင်းရည်ပူပူလေး သောက်နိုင်ပါပြီ
မယ်ဇလီဟင်းချိုရဲ့ လှို့ဝှက်ချက်လေးက ထမင်းရည်ထည့်ရခြင်းပါ အခါးကို သက်သာစေပြီး ဟင်းရည်ကို ခပ်ပြစ်ပြစ်လေး ရစေပါတယ် မာမာကတော့ ထမင်းရည်မရှိတဲ့အတွက် ဆန်အစိမ်းမှုန့်ကို အရည်ဖျော်ပြီး ထည့်ထားပါတယ် ထမင်းရည်ထည့်တဲ့ အရသာအတိုင်း ရစေပါတယ်။
သီးစုံ ငှက်ပျောသီး လက်ပံခေါင်း ပဲချဉ်ရည်ဟင်း
ပါဝင်ပစ္စည်းများ (၃ယောက် ညမနက်စာ)
မုံလာဥနီကို အခွံခွာပြီး ရေဆေးကာ လက်တတစ်အရွယ်တုံးထားပါ
ခရမ်းသီးကို တ၀က်ဖြတ်ပြီး ရေစိမ်ထားပါ
ပြီးတာနဲ့ ဟင်းချက်ရန်ပြင်ထားသော အသီးများကို ရေစစ်ပြီးထည့်ဆီသတ်ပါ
အသီးအရွက်များ ထည့်ပြီးတာနဲ့ ငံပြာရည်ကို တခါထဲထည့်မွှေပေးပါ
အသီးများ နူးများလာတာနဲ့ ပြုပ်ထားသော ပဲကိုထည့်ပြီး ငရုတ်သီးစိမ်းအတောင့်လိုက်နှင့် ရေစိမ်ထားသော မကျီးမှည့်ကို လက်နဲ့ဖျော်ပြီး မကျီးရည်ထည့်ပေးပါ
ဟင်းရည်ပွက်ပွက်ဆူပါက ဆားနှင့် အရသာမှုန့်ထည့်ပြီး အရသာကို လိုသလိုပြင်ကာ သုံးဆောင်နိူင်ပါပြီ။
ဆန်ကြာဇံကို ကြော်တော့မယ်ဆိုရင် မနက်ကြော်ဖို့အတွက် ညထဲက ရေစိမ်ထားတာက ကြော်လို့အကောင်းဆုံးပါ ကြော်ချိန် ၅မိနစ်တောင် မကြာဘဲ အရမ်းကို မြန်ပါတယ်။
ဆန်ကြာဇံ - 200g
ဘရိုကိုလီ - အနေတော် ၂ခက်
ပဲငံပြာရည်အနောက် - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်းခွဲ
ကြက်ဥကြော် ကျက်တာနဲ့ ကြာဇံကြော်ထဲ ရောမွှေကာ တရုတ်နံနံထည့်မွှေပြီး အရသာမြည်းပြီး လိုသလိုပြင်ကာ စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
125g butter,cut up
1/4 teasppon salt
1/4 inche အထူအနေအထားရတာနဲ့ ကွတ်ကီးဖြတ်သော ကွင်းလေးများနှင့်ဖြတ်ပေးပါ
ဗလင်ဒါ မရှိပါက ထောပတ်ကို အပူပေးပြီးဖျော်ကာ ဇလုံထဲထည့်ပြီး ဒိုးသားရအောင် နယ်ပေးရင်လဲရပါတယ်
လက်ဖက်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ မစားဖူးသူတွေလဲ တခါလောက်စားမိရင် နောက်ထပ်စားချင်စိတ်ပေါ်စေတဲ့ အစာလေးပါ မာမာ့သားနဲ့သမီးလေးဆို လက်ဖက်သုပ်သာပါရင် ဟင်းမလိုလောက်အောင်ကို ကြိုက်ကြပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ လက်ဖက်သုပ်ကို နှစ်သက်သလို သုပ်စားကြတဲ့အထဲက ခရမ်းချဉ်သီး ဂေါ်ဖီလေးနဲ့သုပ်ပြီး သုပ်ပြီးသား လက်ဖက်လေးကို သင်္ဘောရွက်လေးနဲ့ ထုတ်ပြီးစားရတဲ့ အရသာရှိတဲ့ လက်ဖက်သုပ်နည်းလေးကို ပြောပြပါမယ်။
လက်ဖက်အကြော်စုံ - လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပန်းကန် တလုံးသာသာ
ဂေါ်ဖီရွက် - အရွက်ကြီးကြီး တရွက်
သင်္ဘောရွက် - အရွက်ကြီးကြီး ၂ရွက်
ဇလုံကျယ်ကျယ် တခုထဲမှာ လက်ဖက်အသားကို အရင်ဆုံးထည့်ထားပါ
ဂေါ်ဖီ ခရမ်းချဉ်သီး ဆီ ဆား အရသာမှုန့်တို့ကို ထည့်ပြီး ခပ်ဖွဖွရောနယ်ပေးပါ
နယ်ဖတ်ပြီးတာနဲ့ စားပွဲပြင်ပြီး ပုဇွန်ခြောက် ငရုတ်သီးစိမ်း ကြက်သွန်ဖြူ သင်္ဘောရွက်တို့ကိုပါ တပါတည်း ပြင်ထားပေးပါ
သင်္ဘောရွက်ကို တခါစားစာ အနေတော်ယူပြီး သင်္ဘောရွက်ထဲ လက်ဖက်သုပ် တလုပ်စာထည့်ကာ ငရုတ်သီးစိမ်း ကြက်သွန်ဖြူ ပုဇွန်ခြောက်တို့နဲ့ ရေနွေးကြမ်းလေး သောက်ကာ နှစ်သက်သလို စားသုံးနိူင်ပါပြီ။
မာမာ့အိမ်မှာ စိုက်ထားတဲ့ kale စိုက်ခင်းလေးပါ
kale အရွက်များကို ကြိတ်လို့လွယ်အောင် လက်တလုံးလောက်လေးတွေ ဖြတ်ထားပေးပါ
အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်တာနဲ့ ဗလင်ဒါထဲ ထည့်ကြိတ်ပေးပါ
အရွက်ထိပ်ဖျားပိုင်းကို ဖြတ်ထားသော Kale - 1cup
အနေတော်လှီးထားသော နာနတ်သီး - 1cup
အနေတော်လှီးထားသော ပန်းသီး - 1cup
သံပုရာရည် - 1tbsp
ရေ. - 5tbps
အခုရက်ထဲ ချက်ဖြစ်တဲ့ ဂေါ်ရခါးသီးကြက်ရိုးဟင်း သောက်ဆမ်းချက်လေးပါ ထမင်းမိန်စေတဲ့ ဟင်းလေးမို့စားပြီးရင်း ထပ်စားစေချင်တဲ့ အရည်သောက်တမ်း ဟင်းလေးပါ ဗူးသီးမရှိလို့ ဂေါ်ရခါးသီးနဲ့ ချက်လိုက်ပေမဲ့ ဗူးသီးလိုဘဲ စားလို့ ကောင်းတဲ့ ဟင်းလေးမို့ စားချင်စိတ်ပေါ်တဲ့အခါ ချက်စားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ကြက်ရိုးများကို အနေတော်တုံးကာ အရင်ဆုံး ရေဆေးပြီး ဆား ငံပြာရည် နနွင်းမှုန့် အရသာမှုန့်တို့နဲ့ နယ်ထားပေးပါ
ဂေါ်ရခါးသီးကို အခွံခွာပြီး အရှည်လိုက် ၆စိတ်စိတ်ကာ အနေတော် အတုံးလေးတွေလှီးပြီး ရေဆေးထားပါ
ကြက်သွန်အဖြူ အနီ ချင်းတို့ကို ငရုတ်သီးမှုန့်နှင့် ရောထောင်းပေးပါ
အားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်တာနဲ့ ဇောက်နက်သော အိုးတလုံးကို အပူပေးပါ
အိုးပူလာတာနဲ့ ဆီထည့်ပြီး ငရုတ်သီးထောင်းကို မွှေးလာတဲ့ထိ ဆီသတ်ပေးပါ
ငရုတ်သီးနံ့ မွှေးလာတာနဲ့ ကြက်ရိုးကို ထည့်ဆီသတ်ပါ
ကြက်ရိုး အရောင်ပြောင်းလာပြီး မာလာတာနဲ့ ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ရေခမ်းကာနီးထိ တည်ပေးပါ
ရေခမ်းကာနီးတာနဲ့ ဂေါ်ရခါးသီးကိုထည့်ပြီး ရေ တရုတ်ဟင်းရည်သောက် ပန်းကန်တလုံးစာလောက်ထည့်ပြီး ဆူအောင်တည်ပါ
ဂေါ်ရခါးသီး နူးလာတာနဲ့ အရည်အရသာအတွက် ဆား ငံပြာရည် အရသာမှုန့်တို့ထည့်ကာ လိုသလိုပြင်ပေးပါ
ဂေါ်ရခါးသီးလဲနူး ဟင်းရည်အရသာ အနေတော်ဖြစ်ပြီဆို သုံးဆောင်ရန် အသင့်ရပါပြီ
ရာသီဥတုက ပူလာပြီဆိုတော့ ရင်ထဲမှာ တခန အေးသွားစေမဲ့ အစာလေးတွေ လုပ်စားဖြစ်ပါတယ် အခုတလော ကီဝီသီးတွေကလဲ လှိုင်လှိုင်ပေါ်နေတော့ ကီဝီသီးဖျော်ရေလေး လုပ်သောက်လိုက် ရေခဲချောင်းလေး လုပ်စားလိုက်နဲ့ပေါ့ ရှင်။
ဒီနေ့တော့ ကီဝီသီး ရေခဲချောင်းလုပ်နည်းလေး ရေးပေးပါမယ်
ရေနဲ့သမအောင်မွှေပေးပြီး ရေခဲချောင်းခွက်ထဲထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာအပေါ်ထပ်ထဲမှာ ထည့်ပြီးလေးနာရီလောက် အကြာမှာ ရေခဲလာတာနဲ့ ချိုချိုမွှေးမွှေး ရေခဲချောင်းလေး စားလို့ရပါပြီ
Labels: ရေခဲချောင်း စားဖွယ်ရာများ
ကီဝီသီးနှင့် သကြား ရေခဲများကျေသွားတာနဲ့ အအေးရေလိုသလောက် ဖန်ခွက်တခွက်စာ ရောပြီး သောက်နိုင်ပါပြီ
ပင်လယ်စာဆီပြန်ဟင်းလေး ချက်ဖြစ်လို့ပါ မာမာဟင်းချက်ရင် ဟင်းချက်အမွှေးအကြိုင် သိပ်ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ မထည့်ဖြစ်ပေမဲ့ မြန်မာ့ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်လေးတော့ ထည့်ချက်ဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့လည်း ပင်လယ်စာ အစုံကို မြန်မာ့ဟင်းပွဲတွေမှာ ထည့်လေ့ထည့်ထရှိတဲ့ မကျီးသီးမှည့် နံနံပင် စပါးလင် ငရုတ်သီးမှုန့် ချင်း ကြက်သွန်အဖြူ အနီတို့နဲ့ ချက်ထားတဲ့ ဆီပြန်ဟင်းလေးပါ။
ပင်လယ်စာအစုံ - 300g
ချင်း - လက်တစ်ဆစ်ရဲ့ တ၀က်
ဆား - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သုံးပုံ တပုံ
ပင်လယ်စာအစုံထဲမှ ဂုန်းသားလေးတွေကို အစာအိတ်များဖယ်ပေးပါ
လက်ဖက်နှပ်နည်းလေးတွေ အဆင့်ဆင့်ရေးပြီးပြီမို့ အခုတော့ ပွဲပြင်လက်ဖက်နှပ်နည်းလေး ရေးပေးချင်ပါတယ် လက်ဖက်ကို နှစ်သက်သလို သုပ်စား ချက်စားကြတာမို့ အခုကတော့ ပွဲပြင်လက်ဖက်နှပ်နည်းလေးကလည်း ဧည့်သည်လာတဲ့အခါ အသုံးပိုပြီး ၀င်သလို အရသာ ပိုပြီးကောင်းတဲ့ လက်ဖက်သုပ်ပြင်ဖို့အတွက် ဧည့်သည် လျှာလည်စေမဲ့ နနည်းလေးပါ။
နှပ်ပုံနှပ်နည်းလေးကတော့ အတူတူပါဘဲ အများနှစ်သက်တဲ့ ရွှေပုဇွန်ခြောက် အကောင်လိုက်ထည့်ပြီး နှပ်လိုက်တဲ့အတွက် မျက်နှာပန်းပိုပြီးလှစေသလို အရသာလဲ ပိုစေတဲ့ ချဉ်ငံစပ် လက်ဖက်နှပ်နည်းလေးပါ။
လက်ဖက်အသား (လက်ဖက်အညွန့် ) - လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန်လုံး တလုံးခွဲစာ
ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် - လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန်လုံး တလုံးစာ
ငရုတ်သီးစိမ်း - ၁၅တောင့် အစပ်ကြိုက်လျှင် ပိုထည့်ပါ
ပုဇွန်ခြောက် - အကောင်လှလှ အကောင် ၂၀ခန့်( ပိုထည့်လဲရ )
အချိုမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်း (မစားလျှင်မထည့်လဲရ)
မြေပဲဆီစစ်စစ် - လက်ဖက်ရည် အကြမ်းပန်းကန်လုံး တလုံးသာသာ
လက်ဖက်အရွက်ကြမ်းဖြစ်ပါက လက်ဖက်အသားကို ရေ၂ထပ်လောက်ဆေးပြီး ရေစင်အောင်ညှစ်ပေးပြီးမှ ငရုတ်ဆုံထဲ ညက်နေအောင် ထည့်ထောင်းပေးပါ
ကြက်သွန်ဖြူ၇မွှာကို မညက်တညက်ထောင်းပေးပြီး ကျန်သုံးမွှာကို အကွင်းလိုက်လှီးထားပါ
ငရုတ်သီးစိမ်း ၁၃တောင့်ကို ညက်နေအောင် ထောင်းထားပြီး ကျန်၂တောင့်ကို အကွင်းလိုက်လှီးထားပါ
ဆား ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် ငရုတ်သီးစိမ်းထောင်း အချိုမှုန့် ကြက်သွန်ဖြူထောင်းတို့ ထည့်ပေးပြီး ခပ်ဖွဖွ အားလုံးသမအောင်နယ်ပေးပါ
အရသာမြည်းကြည့်ပြီး လိုသလိုပြင်ပေးကာ ပုဇွန်ခြောက် အကောင်လိုက် အကွင်းလိုက်လှီးထားသော ငရုတ်သီးစိမ်း အကွင်းလိုက်လှီးထားသော ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ဆီထည့်ပြီး သမအောင်နယ်ပေးပါ
အားလုံးသမသွားပါက လေလုံသော ဖန်ပုလင်းထဲတွင် ဆီမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထားစားပါက နှစ်ပေါက်အောင် စားသုံးနိုင်တဲ့ ပွဲပြင်လက်ဖက် ချဉ်ငံစပ်နှပ်လေးရပါပြီ။
လက်ဖက်အသားကို အမျိုးမျိုးနှပ်စားကြသလို ၀က်သားနဲ့လည်းချက်တတ်ကြပါတယ် လက်ဖက်ထမင်းသုပ်လေးလုပ်စားနိုင်သလို လက်ဖက်ထမင်းလေးလဲ ကြော်စားနိုင်ပါသေးတယ် ဒီနေ့တော့ အလုပ်နည်းနည်းအားတာနဲ့ လက်ဖက်မျိုးစုံနှပ်နည်းလေး ရေးပေးချင်ပါတယ်။
ဓါတ်ပုံကိုတော့ အဆင်ပြေသလို ရိုက်ထားပါတယ် တယောက်ထဲ ပြင်ရဆင်ရတာဆိုတော့ လက်ဆေးလိုက် ကင်မရာကိုင်လိုက်နဲ့ ပါတ်ချာလည်နေတာမို့ အဆင်ပြေသလိုလေး တင်ပေးထားပါတယ် အချိုကြိုက်သူတို့ အချိုနှပ်နိုင်သလို အအစပ်ကြိုက်သူအစပ် ချဉ်စပ်ကြိုက်သူ ချဉ်စပ်လေး နှပ်ပြီး စားနိုင်အောင်လို့ပါ။
အရသာမြည်းကြည့်ပြီး လိုသလိုပြင်ပေးကာ အကွင်းလိုက်လှီးထားသော ငရုတ်သီးစိမ်း အကွင်းလိုက်လှီးထားသော ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ဆီထည့်ပြီး သမအောင်နယ်ပေးပါ
အားလုံးသမသွားပါက လေလုံသော ဖန်ပုလင်းထဲတွင် ဆီမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထားစားပါက နှစ်ပေါက်အောင် စားသုံးနိုင်တဲ့ လက်ဖက်အစပ်နှပ်လေးရပါပြီ။
လက်ဖက် အချိုနှပ်လေး ရေးပေးပြီးပြီဆိုတော့ ပိုပြီးပြည့်စုံသွားရလေအောင် ချဉ်ငံစပ်လက်ဖက်နှပ်လေး မျှဝေချင်ပါတယ် မာမာကတော့ စောင်းလျားသီး အစိမ်းမရှိလို့ သံပုရာသီးနဲ့ဘဲ အချဉ်အရသာကိုယူပြီး နှပ်ထားပါတယ် မာမာ့အမေဆိုရင်တော့ စောင်းလျားသီးအစိမ်းကို မညက်တညက်ထောင်းပြီး နှပ်လေ့ရှိပါတယ် အခုတော့ အဆင်ပြေသလိုလေး အမေ့နည်းကို အခြေပြီး နှပ်ထားတဲ့ ချဉ်ငံစပ်လက်ဖက်လေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ - အမွှာကြီးကြီး ၁၅မွှာ
ငရုတ်သီးစိမ်း - အတောင့်းသး ၁၅တောင့် (အစပ်ကြိုက်ပါက ပိုထည့်ပါ)
ဒီနေ့တော့ ပိတ်ရက်လေးဖြစ်ပြန် မိသားစုစုံတဲ့ ရက်လေးလဲ ဖြစ်ပြန်တော့ လက်ဖက်အသားလေး နှပ်တန်တာနှပ် သုပ်တန်တာသုပ် အစားအသောက် ပြင်ဆင်နေရရင် မပျင်းတတ်လေတော့ မာမာတယောက် မီးဖိုဆောင်ထဲမှာ အလုပ်ရှုပ်ရပြန်ပြီပေါ့နော်။
အခုတော့ လက်ဖက်အချိုနှပ်နည်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ် တယောက်နဲ့တယောက် နှပ်ပုံနှပ်နည်းလေး ကွာချင်ကွာပါလိမ့်မယ် မာမာကတော့ မာမာ့အမေ အလှူအတမ်းတွေမှာ နှပ်တဲ့နည်းလေးအတိုင်း နှပ်ထားတာပါ စားတဲ့အခါ အရသာကတော့ နတ်သုဒ္ဒါပေါ့နော်။
လက်ဖက်အညွန့်မဟုတ်ဘဲ လက်ဖက်အကြမ်းဖြစ်နေပါက လက်ဖက်အသားကို ရေ ၂ထပ်လောက်ဆေးပြီး ရေစင်အောင်ညှစ်ကာ ငရုတ်ဆုံမှာ ညက်နေအောင်ထောင်းပေးပြီးမှ လက်ဖက်ကိုနှပ်ပေးပါ
ကျန်တဲ့ငါးမွှာကို မထူမပါး အကွင်းလိုက်လှီးထားပါ
ဆား ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် အချိုမှုန့် ကြက်သွန်ဖြူထောင်းတို့ ထည့်ပေးပြီး ခပ်ဖွဖွ အားလုံးသမအောင်နယ်ပေးပါ
အရသာမြည်းကြည့်ပြီး လိုသလိုပြင်ပေးကာ အကွင်းလိုက်လှီးထားသော ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ဆီထည့်ပြီး သမအောင်နယ်ပေးပါ
အားလုံးသမသွားပါက လေလုံသော ဖန်ပုလင်းထဲတွင် ဆီမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထားစားပါက နှစ်ပေါက်အောင် စားသုံးနိုင်တဲ့ လက်ဖက်အချိုနှပ်လေးရပါပြီ။
ဒီအချိန်ဆို လက်ပံတွေပွင့်ပြီမို့ လက်ပံပွင့်ကောက်ရင်း သီချင်းလေး တကြော်ကြော် အော်ဆိုခြ့တဲ့ ငယ်ငယ်က ဘ၀လေးကိုလဲ လွမ်းမိပါတယ် လက်ပံပွင့်ချိန် ခွေးရူးချိန်ဆိုလို့ အိမ်အပြင်ထွက်တိုင်း ခွေးလေးတွေကို လိုက်ကြည့်ရတာလဲ အအေမောပါဘဲ။
သူငယ်ချင်းတသိုက် လမ်းထိပ်လက်ပံပင်မှာ သူရူးကိုယ်ရူး သီချင်းလေးတွေ အော်အော်မြူးခဲ့ရတာ အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပေမဲ့ အခုလို လက်ပံပေါ်ချိန်တိုင်း ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းလေးတွေကိုတော့ လွမ်းမိသားနော်။
ဒီနေ့တော့ လက်ပံခေါင်းကို အချဉ်ဆီပြန်လေးချက်ပါမယ် အသားမစားတဲ့ သတ်သတ်လွတ် စားသူတွေ အတွက်တော့ သူတမျိုးထဲနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဟင်းလေးပါ။
အခြောက်လှမ်းထားသော လက်ပံခေါင်း - ၂၀ခု
ခရမ်းချဉ်သီး ကြီးကြီး - ၂လုံး
ကြက်သွန်ဖြူ အမွှာကြီးကြီး - ၂မွှာ
ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
ဆီ - လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး တ၀က်သာသာ
လက်ပံခေါင်းကို မချက်မှီ တနာရီလောက်ထဲက ကြိုပြီးရေစိမ်ထားပါ
ကြက်သွန်အဖြူ အနီ ချင်းတို့ကို ငရုတ်သီးမှုန့် ရောပြီးထောင်းထားပါ
ဆီကိုအပူပေးပြီး ငရုတ်သီးထောင်များ ထည့်ပြီးဆီသတ်ပါ
ခရမ်းချဉ်သီး အိပြီးပျော့လာတာနဲ့ လက်ပံခေါင်း ဆား အရသာမှုန့်တို့ထည့်မွှေပေးပါ
ဆီနှင့်အရသာ သမသွားတာနဲ့ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး လက်ပံခေါင်း နူးတဲ့အထိ တည်ပေးပါ
လက်ပံခေါင်းနူးပြီး ဆီပြန်လာပါက အရသာမြည်းပြီး လိုသလို သုံးဆောင်နိူင်ပါပြီ
အိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့ မြင်းခွာရွက် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေးတွေ သုပ်စားဖြစ်ပါတယ် မြင်းခွာရွက်ကို တန်ပူရာမှုန့်နဲ့ဘဲ ကြော်ကြော် ဟင်းခါးလေးဘဲချက်ချက် အတို့အမြုပ်လေးဘဲလုပ်လုပ် ချဉ်ငံစပ်လေးဘဲသုပ်သုပ် အရမ်းကို ကြိုက်တာပါ ဒါကြောင့်မို့လဲ အိမ်မှာ အလွယ်တကူရအောင် ပန်းအိုးလေးတွေနဲ့ စိုက်ထားတာမို့ စားချင်ရင် အဆင်သင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ မြင်းခွာရွက်ကို ချဉ်ငံစပ်လေး သုပ်ပါတယ်အဆင်ပြေရင် သုပ်စားကြည့်စေချင်ပါတယ်
ရေစက်အောင်ဆေးပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလှီးထားသော မြင်းခွာရွက် - လက်နှစ်ဆုတ်စာ
မညက်တညက်ထောင်းထားသော မြေပဲလှော် - ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်း
ညက်နေအောင်ထောင်းထားသော ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်းခွဲ
ငံပြာရည် - ထမင်းစားဇွန်း တ၀က်သာသာ
သံပုရာရည် သို့မဟုတ် အကျီးမှည့်ရည် - ထမင်းစားဇွန်း တ၀က်သာသာ
ကြက်သွန်နီဆီချက် - ထမင်းစားဇွန်း တဇွန်း
ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတဇွန်း
ပန်းကန်ကျယ်ကျယ်တခုထဲ အားလုံးရောထည့်ပြီး ခပ်ဖွဖွနယ်ပေးကာ အရသာမြည်း၍ လိုသလို ပြင်ကာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ